Maqaa faayilii ,galeeloo ykn faayilii fi galeeloo hunda oofaa ykn galeeloo kan xurree barbaachisaa waliin wal gitu deebisi.
Barruu:Himamsa itergaa kamiyyuu kan xurree barabaachisaa,galeeloo fi faayilii. Qajeelfamni kun kan ibsamu yommu ati faankishinii Dir waamtu. yoo barbaadde, xurree sirnasxaa URL haala kanaan galchuu dandeessa.
Attrib: Himamsa itergaa kamiyyuu kan faayilii laklamee ibsu. Faankishiniin Dir jedhamu faayiliin ykn galeeloon amaloota ibsaman waliin wal madaalu deebisa. Amaloota hedduu gatii amalootaa ida'uun walitti makuu dandeessa.
0: Faayilii baratamoo.
16 : Maqaa galeeloo qofa deebisi.
Akka faayiliin ykn galeeloon jiru mirkaneessuu yoo barbaadde amaloota faayyadami ykn faayilii fi ukaankaa hunda galeeloo keessatti murteessi.
Jiraachuu faayiliin mirkaneessuuf,xurree fi maqaa faayilii guutuu galchi. Yoo maqaan faayilii ykn galeeloon jiraachuu baate ,faankishiniin Dir dheerina diraa duwwaa (" ") deebisa.
53 Faayilii hin argamne 53 Faayilii hin argamne 53 Faayilii hin argamne 53 Faayilii hin argamne 53 Faayilii hin argamne 53 Faayilii hin argamne
REM  Faayiloota fi galeeloota hunda agarsiisi.
REM Galeeloota argadhu